Super Diamond Deluxe kukukhumbuza okunethezeka eliphelele! Kukwenza uzizwe kanjani ukuthi kumane phakathi ayigugu ekhanya ikunikela ukukhokhelwa multiple. Ubuhle slot itholakala iqiniso lokuthi azikho endle noma chitha amatshwayo. Ngakho, udinga sihlose kulabo izinhlanganisela 3 noma 4, ukushayela ekufezeni win. Konke udinga is a bit of inhlanhla ukuba abe inkosi yakwa-the Super Diamond Deluxe slot reels.
IGT noma International Gaming Technology iyinhlangano isofthiwe ikhasino wokudlala ukuhlinzeka inkampani kusukela 2006 egameni Gtech corporation lapho Gtech ngazuza Lottomatica e 2006. Kusukela ngaleso sikhathi, inkampani okwenza emangalisayo slot imidlalo mesmerizing abathandi casino zonke manje bese. Muva, e 2015, inkampani etholakale igama layo lapho litholakala inkampani American IGT wathatha igama layo.
Super Diamond Deluxe kuyinto elula slot game. Isihloko lihlobene amatshe ayigugu njengoba izimpawu kukhona ngeyamarubi, jades futhi emuhle cutwork diamonds. Ngakho reels libukeke abanezizinda red ejulile ngamatshe kuphazima phezu kwalo. I wokugembula udlalwa nge 5 reels futhi 10 paylines futhi akudingekile ukuthi umugqa win ungaqala kuphela kusukela esondweni lokuqala. Ngaphandle nje amagugu colorful, 10, J, Q, K, A kukhona amatshwayo ongaphakeme kokukhokha. Azikho endle noma osakaza kule slot esakha ukukhokhelwa ngawe. Ibhonasi eyinhloko esetshenziswayo lesichubekako jackpot isici umdlalo. Futhi, njengoba izimpawu athole embondelene phezu reels, kungenzeka ukuba enze onqobayo olukhulu kule slot. In the Progressive jackpot isici, azikho fixed ngokuwina inhlanganisela okudingekayo. Wena nje kudingeka vula reels egolideni okwenzeka ngezikhathi ngenkathi wena osebenzisa. I ukubuya Amaphesenti umdlali omuhle kakhulu njengoba slot inikeza inkokhelo ukuze mayelana 96.43% of the time . Uhla zokubheja kuqala £ 0.20 futhi akhuphukele £ 500. Ebheka simo esishubile, the game offers somewhere between low to medium volatility, Nokho, ngenxa jackpots lesichubekako, abantu abane ephezulu esesuthi futhi kungaba zicime ukoma kwazo.
Isizinda kanye soundtrack bebelokhu ehloniphekile futhi kahle tihambisane isihloko Super Diamond Deluxe. IGT unezinye Slots ahlukahlukene ahlobene kakhulu kule indaba ephathwayo, kodwa lokhu slot umi ezahlukene ebuka malula futsi enjoyability of Gameplay. Ngakho, abantu abafuna nje abe nesikhathi fun ngokuqinisekile okufanele uhambe salokhu slot.